Umgadi weemigodi. 🥇 Idlalwa njani iMinesweeper. Isiphelo sendlela
Umgadi weemigodi. Idalwe kwiminyaka elishumi elinethoba amashumi asibhozo anesithoba, iMinefield yeza kwiWindows engamashumi amathathu ananye kuphela kumashumi alithoba anesibini kwaye isothusa abadlali abaninzi namhlanje. Ujongano lwayo lutshintshile kakhulu kule minyaka idlulileyo, kodwa oomatshini boomatshini bahlala behleli. Ndiyabheja yile nto kanye unomdla kuyo: kuba amava akho angaphambili akakhange akulethele iziphumo ezintle, ungathanda ukuqonda ngokweenkcukacha indlela yokudlala iMinesweeper.
Ngomnye wale midlalo edlalwe ngumntu, ubuncinci kube kanye ebomini babo. Yayifakwe phantse kuzo zonke iinguqulelo zeWindows ukuya kuthi ga kwisibhozo, xa iMicrosoft yathatha isigqibo sokuyicima nayo Ngamalolo kunye nezinye izinto zokuzonwabisa esele zifakwe ngaphambili kwinkqubo yakho yokusebenza kule minyaka idlulileyo. Abanye bakubiza njalo ibala lemigodiNgokwenyani, oku kukwahluka komdlalo (ofanelekileyo wezopolitiko) owaziswa ngeWindows XNUMX ebonakalisa ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokuchanekileyo ngokufanayo.
Ngapha koko, kwisifundo sanamhlanje, ndiza kuchaza ukuba uyifumana njani kwaye uyidlala njani iMinefield ngokuthetha ngenguqulelo yamva nje yeMinefield yasimahla kwivenkile yeWindows XNUMX, ekwanokubamba. kwaye unganxibelelana neXbox Live ukuze wabelane ngenkqubela yakho. Yizame kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba awuyi kuzisola! Ukuba awanelisekanga ngokwenyani, andizukuyeka ukukunika ezinye iindlela ezifanelekileyo zekhompyuter, i-smartphone kunye nethebhulethi. Ukufunda okumnandi kwaye ngaphezu kwako konke, kukunandiphe!
Umgadi weemigodi | I-Minesweeper ekwi-Intanethi
Kwinguqulelo yamva nje yomdlalo okhutshwe nguMicrosoft zimbini iindlela ezikhoyo: ukuba yodidi, evelisa ngokuthembekileyo izinto ezibonakalayo zePrato fiorito, kwaye yeyiphi isenzo sodelo-ngozi kwelinye icala, ebonisa izinto ezintsha ezintsha. Masiqale ngeyokuqala, kungoko ufunda esi sikhokelo.
En Imowudi yendawo yemigodi yemveli kukho igridi ye iibhokisi ezigqunyiweyo, emele indawo enokufihlwa kuyo imigodi: ukuphumelela, kuya kufuneka ucime isikwere ngasinye esingenanto ngexesha elifutshane. Kule nguqulo, endaweni yemigodi, uya kufumana i-ladybugs, kodwa umsebenzi awutshintshi. Ngaphandle kokucima izikwere ngonqakrazo (okanye itephu), unokumakisha abo ucinga ukuba bafihle umgodi kwaye ubathintele, ukuze ungazicimi.
Ungancamathisela enye iflegi ebomvu kwezi bhokisi ngokunqakraza ekunene kwimouse okanye uchukumise ixesha elide: ukuphinda le ntshukumo, endaweni yeeflegi, a uphawu lombuzo otyheli eya "kuvula" iithayile ezikhethiweyo kwaye ikuvumele uzikhulule. Ukuphumelela, kuya kufuneka ususe isikwere ngasinye esinemigodi, ngaphandle kokuqhushumba umgodi omnye.
Kukho amanqanaba ama-3 obunzima anokukhetha kuwo: qalisa, phakathi y phambili. Ukwahlula linani lezikwere kunye neemigodi kwigridi: izikwere ezilithoba × ezisithoba ezinemigodi elishumi kweyokuqala, ishumi elinesithandathu × ishumi elinesithandathu elinamashumi amane kowesibini, kwaye amashumi amathathu × ishumi elinesithandathu namashumi alithoba anesithoba kwesithathu. Unokukhetha ukudlala inqanaba nge iigridi zesiko, apho unokukhetha khona ukuba zingaphi iibhokisi ekufuneka ungene kuzo altura, banzi kunye nenani leemigodi okanye Coccinelle. Umahluko wokuqala kumhlaba wesine × ezisibhozo awusekho simahla.
Uninzi lweebhokisi zasimahla zingenanto, kodwa ezinye zinayo inombolo 1 ukuya ku-6: luphawu oluxabisekileyo, kuba zibonisa ukuba zingaphi iimayini kule ndawo. Kukhethwa ukuba uzicime iibhokisi ecaleni kwezo zingenalo inani ngaphakathi uze uziphawule njengeziyingozi ezo zikufutshane nesihlanu okanye ezintandathu. Ukongeza koku, kufuneka uthembele kwithamsanqa lakho, kuba azikho ezinye iingcebiso ezizodwa okanye amaqhinga okuphumelela iMinefield. Ngumdlalo omnandi ngokwenene lowo!
Indlela isenzo sodelo-ngozi Yinto entsha enomdla kwaye inokubonwa njengomdlalo owahluke ngokupheleleyo, nangona ugcina izinto ezithile ezibonakalayo kumgcini-mgodi wesintu. Apha, umgodi udlala indima yokuhamba kuthotho lweetonela ezidibeneyo (nganye imele inqanaba), imigodi yeebhokisi ecaleni kwendlela. Endaweni yemigodi, imigibe ifihliwe: uqala ngobomi be-3 kwaye unokufumana ngaphezulu ngokuqokelela iintliziyo. Iingqekembe zonyusa amanqaku.
Imowudi ye-adventure incinci "iyaphazamisa" kunaleyo yesiko, ngenxa yokuba ukuba ufumene umgibe usenamanye amathuba ama-2 okugcwalisa inqanaba. Ubukho beengqekembe kunye nezinye izinto zokudibanisa ukuvula iingcango ze-maze (ukuqhubeka kwiisenzo sodelo-ngozi) yenza amava omdlalo aqiniseke ngakumbi: iibhokisi eziza kuvulwa ngawo onke amaxesha zinokuqulatha inani lokuchongwa kwemigibe ekufutshane kwaye oomatshini bayafana ncam njengoko bekuchaziwe ngaphambili.
Ukongeza kwiingqekembe zemali, umgodini unokuqokelela inkunzi yegolide y armas bulala abachasi kwaye utshabalalise imigibe endleleni yakho: nganye yezi zenzo inceda ukwandisa amanqaku omdlalo. Akukho flegi okanye amanqaku emibuzo, kodwa kukho iimpawu ezibomvu nezimhlophe ezibhalwe uphawu lophawu, Ezineenjongo ezifanayo kwaye zenziwe ngonqakrazo lwasekunene okanye ngomnwe omde.
Entsha ayiphelelanga apha, njengoko iMinefield ngoku ikwanikezela ngokuqinisekileyo imingeni yemihla ngemihla Zisekwe kwimowudi efanelekileyo yemveli kwaye ikuvumela ukuba unyuke ibhodi yabaphambili yenyanga ngeebhonasi ezinokuchithwa kumdlalo. Le mingeni yemihla ngemihla inokufikelelwa kwelona phepha lomdlalo kwaye kuyacetyiswa ukuba ugcwalise amanyathelo ahlukeneyo: ukuba ngumzekelo, komnye umceli mngeni kungafuneka ukuba uphawule imigodi elishumi ngeeflegi (ngaphandle kokukhulula nayiphi na ibhokisi) kwaye kwelinye ukunyathela imigodi.
Imiceli mngeni inika amakhaka ama-4 obhedu, isilivere, igolide kunye nedayimani, kuxhomekeke kwinkqubela phambili yenyanga. Inqanaba lokuntsokotha libonisa imowudi yeklasikhi- ungoyisa umceli mngeni njengabaqalayo, phakathi okanye enye ingcali.
Ukongeza kumabhaso awodwa, abhekisa ikakhulu kuhlobo lomdlalo (endiza kuthetha ngalo kungekudala), inqaku kukufikelela iinjongo Xbox Live
Ewe ufunda ilungelo! I-minefield ayinakudlalwa kwiikhonsoli zeMicrosoft, kodwa ungafumana amanqaku kwiakhawunti yakho yeXbox Live! Ngoku, nangona kunjalo, ukuthetha ngokwaneleyo: ixesha lifikile lokuqonda ukuba ungayifaka njani iMinesweeper kwikhompyuter yakho.
Eminye indlela eya kwiMineweeper
Ngoku ndiza kuchaza ezithile Ezinye iindlela zentsimi ukukhetha ukuba awonelisekanga yiMicrosoft Minesweeper.
I-Minesweeper: Izinto ezibalulekileyo (Windows XNUMX)
Olunye ukhetho lokuqala endilucebisayo yile I-minefield: izinto ezibalulekileyo, Inkqubo yasimahla onokuyifumana ngokusemthethweni Windows XNUMX ivenkile kwaye unokufaka ngokunqakraza kwiqhosha fumana. Akukho zongezo zithengwayo okanye iintengiso kuyo yonke imidlalo. Nangona kunjalo, imo yeAventure ilahlekile. Ngumdiliya wendabuko oneentyatyambo kunye namanqanaba ama-3 achazwe kwangaphambili obunzima kunye nolunye uhlengahlengiso.
Ubungakanani beigridi kunye nenani leemigodi kwinqanaba ngalinye zikumgangatho, ke ngoko, ziyafana kwiMinefield yeMicrosoft. Ukwenza ngokwezifiso igridi kukwabonelela ngamaxabiso afanayo: amagama atshintshayo, ngenxa yokuba apha unokukhetha phakathi kweendlela kulula, majelo okanye enye difícil. ngaphakathi ukhetho Uya kufumana imixholo emi-3 yokwenza imidwebo yomdlalo kunye nolawulo oluthile olunxulumene nexesha, izandi kunye nophawu lombuzo oluqhelekileyo. Ibaluleke ngokwenyani njengoko isihloko sethembiso.
Le ndawo ine-mine ibonelela ngenkqubo ye- manani kumanqaku azuzwe kwimidlalo, kodwa awunakho ukuqhagamshela kwi-Xbox Live ukuze wabelane ngayo nabahlobo: ukuba ufuna ukudlala iPrato Fiorito, andicingi ukuba oku kunokuba yingxaki. Ngokubhekisele kubuchwephesha bomdlalo, iintshukumo ziyafana nezo zomdlalo weMicrosoft: ukucofa okanye ukuchukumisa ukukhupha iibhokisi, ucofe ekunene okanye uchukumise ixesha elide ukumakisha. Elula, akunjalo? Imizobo intle kakhulu nayo.
Isigcini migodi! (Windows ezilishumi)
Olunye ukhetho lwesibini endilucebisayo kuwe, Isigcini migodi!Kufanelekile ukuba ibe yindawo yokwenene yemigodi. Imizobo ayisiyiyo eyona ilungileyo, kodwa umdlalo uvelisa kwakhona izinto ezizezokuqala zeWindows: uhlala kwaye kuzo zonke iimeko ungayifumana kwiVenkile kaMicrosoft.
Zine iigridi (ezihlala zikho kwaye kuzo zonke iimeko zahlulwe ngokwamanqanaba obunzima), Oko kukuthi kulula, phakathi, difícil y iphupha elibi. Apha akukho thuba lokwenza ngokwezifiso imilinganiselo kunye nenani leebhokisi eziza kukhutshwa lihluke kakhulu kwimigangatho.
Kwimowudi elula egqibeleleyo, iigridi zizisibhozo × ezilithoba izikwere ezineemigodi ezilishumi; phakathi kwe-10x12 kunye neemigodi ezimashumi mabini; kubunzima obulishumi elinambini × elinesine elinemigodi engamashumi amathathu nakwiNightmare elishumi elinesithathu × elishumi elinesihlanu enemigodi engamashumi amane. Ubucukubhede bomdlalo busisiseko: nakuphi na ukucofa okanye ukuchukumisa ukukhutshwa kwebhokisi efanelekileyo, ngaphandle kokumakisha abarhanelwa. Umdlalo uguqulelwe kwisiTaliyane, kodwa kwi useto Ungalutshintsha kwakhona ulwimi okanye imvelaphi yefestile: ukufikelela, cofa nje kwi icon ikhabhathi okumbindi weziko.
Isigcini sombiwa (macOS)
Ukuba usebenzisa iMac, ungadlala iMinefield ngokufaka usetyenziso lwasimahla lwegama elifanayo kwiVenkile ye-Mac, onokuyifaka ngokucofa iqhosha Fumana / Faka, ebekwe kwinxalenye ephezulu yasekunene kwaye iyaziqinisekisa, ukuba kukho imfuneko, nge password i-ID yakho ye-Apple okanye IDA (ukuba iMac yakho inenzwa yeminwe).
Umdlalo weqonga uyafana ngokufanayo nakwindawo yemigodi yemveli, kunye nepateni yeshumi × elishumi elinambini kunye namashumi amabini emigodi. Ukulungelelanisa useto lomdlalo, kufuneka ucofe i icon ikhabhathi ibekwe kwiziko elisezantsi kwaye ukhethe umba useto ukusuka kwimenyu evulayo.
Idlalwa njani iMinesweeper ekwi-Intanethi
Ukudlala iMinesweeper ngokufaka inkqubo kwikhompyuter yakho kulula kakhulu, kodwa awunakuziva ngathi ungathatha indawo yediski kuloo mdlalo. Ke kutheni ungadlali ngokuthe ngqo kwi-Intanethi? Kwiwebhusayithi kukho iindawo ezininzi ezikuvumela ukuba wenze: enye yazo Minesweeper kwi-Intanethi ekwanayo nenguqulo ehlawulelweyo kwiVenkile yeVenkile. Ndiyiphakamisa le nto kuwe kukuba inemizobo efanayo kunye nolawulo njengemigodi yam yokuqala yeWindows.
Indawo ibhalwe ngesiNgesi, kodwa awudingi kwazi ulwimi oza kuludlala. Iigridi zinemilinganiselo esemgangathweni yeMicrosoft Minesweeper: ngokunqakraza kuyo juego, ebekwe ngasentla ngasekhohlo, unokukhetha phakathi qalisa, phakathi y ingcaliEzihambelana nesiQalo, esiPhakathi kunye neNgcali. Isiko yemowudi ehlengahlengisiweyo egqibeleleyo, apho unokuseta khona altura (Ubude) banzi (Ububanzi) kananjalo yimigodi (Eyam). Ukumakisha a iimveliso kwindawo yakho, yenza uphawu lombuzo.
Umatshini womdlalo ubona kwangaphambili ukucofa ngasekhohlo ukukhulula izikwere kunye nelungelo lokumakisha: ukucofa lawulo jonga isishwankathelo seendlela ezimfutshane ezinqumlayo kunye nezindululo. Ukhetho lunomdla imbonakalo ekuvumela ukuba uqikelele okanye umgama kwigridi ukusuka kwikhulu leepesenti ukuya kumakhulu amabini eepesenti.
Imo yasebusuku endaweni yoko, tshintsha imvelaphi yendawo kwaye unciphise ilitha lefestile ukugcina amandla ubusuku bonke.
Ewe, ndichaze indlela yokudlala iMinefield kwikhompyuter nakwi-Intanethi, kodwa ukuba ufuna ukuyenza ukusuka fowuni okanye enye ithebhulethi? Sukuba nexhala: zininzi ii -apps zasimahla ezikuvumela ukuba udlale kwi-Android nakwi-iOS nayo. Abanye baye bahlaziya imivalo!
Umgcini migodi: Umqokeleli (Android / iOS): Umahluko kumhlaba wasemgodini wendabuko, ngaphandle kokuba negridi yeemilo ngaphandle kwezikwere okanye iingxande, kubandakanya amanqanaba kunye nokuqokelela.
Umhlaba jikelele (I-Android / iOS) -diniwe ziibhari ezinamacala amabini? Ngalesi sicelo ungadlala kumacandelo nakwiityhubhu. Umahluko weMinefield ngokupheleleyo kuvavanyo.
Ihlabathi leemigodi (I-Android / i-iOS) - jikelezisa imigodi kwiimephu zamazwe eeplanethi ngolu hlobo lomhlaba okumene ekucela ukuba uphonononge iJografi.
Uyifaka njani iMinefield Windows 10
Ndifunde ukudlala, lixesha lokuba ndichaze Uyifaka njani iMinefield Windows 10. Umdlalo ukhululekile kwivenkile yokusebenza yenkqubo kaMicrosoft, ke konke oku kufuneka ukwenze kukucofa iqhosha eliluhlaza ngokubhala fumana kwiphepha elisemthethweni leMicrosoft Minesweeper.
Isicelo, njengoko sele kukhankanyiwe, simahla, kodwa kukho umxholo oncedisayo ohlawulwayo onokuvulwa emva kofakelo: ungabhalisela Ukubhaliselwa kwepremiyamu inyanga nganye ikhulu elinamanci mane anesithoba eeuros okanye unyaka ngee89 zeeruro. Ngelishwa, umdlalo uqulethe iibhanile kwaye unyanzelwa ukuba ubukele iividiyo zentengiso zemizuzwana embalwa ongenakucima. Esona sisombululo kufuneka udlule kuso kukubhalisa. Ezinye izibonelelo zokubhaliselwa ziingqekembe zemali ezincedisayo (eziyimingeni) kunye nezinto ezizodwa zendlela efanelekileyo yeAventure.
Xa sele sithethile, masithathe inyathelo! Ukukhuphela kugqityiwe, qala IMicrosoft Minesweeper nge icon yayo kwimenyu yokuQala kwaye uqalise umdlalo kwi Imowudi yakudala okanye kwifayile ye- Imo yokundwendwela, emva koko ucofe iibhokisi ezifanelekileyo kwinqanaba elifunayo lobunzima: qalisa, phakathi okanye enye ingcali.
Ifestile ephambili yeMinefield, enokwandiswa iye kwiscreen esigcweleyo ngokusebenzisa i icon eneentolo ezi-2 ngaphezulu ngasekunene, uskrolela ngokuthe tye: ngokuskrolela ngasekhohlo, unokufumana amanani kwimidlalo nakwiinjongo ze-Xbox Live ezifezekisiweyo. Ungahamba contact kuphela ngenguqulo ehlawulelweyo yeprimiyamu: kuhlobo olusisiseko kuphela okungagqibekanga kuvela.
Nangona kunjalo, ukufikelela kulungelelwaniso lomgodi, kufuneka ucofe i icon ebekwe phezulu ngasekhohlo kwaye ukhethe umba useto kwimenyu ecetywayo kuwe: oku kuzakuvula ipaneli esecaleni apho unokuhlengahlengisa khona i ongakhetha umdlalo.
Ungahlengahlengisa ivolumu kwaye wenze okanye wenze kungasebenzi izilumkiso, ngelixa ungakhetha kwangoko ukuba uyafuna ukusebenzisa i okanye amanqaku emibuzo. Ukuba ikhompyuter yakho iyakuvumela, unokuhlengahlengisa ku thintela kunye Imizobo kwaye unokusebenzisa utshintsho lwe imowudi ekhawulezayo kunye / okanye imiyalelo Ukufuduswa. Okokugqibela, unokukhetha ukubuyisela useto kwi useto olungapheliyo okanye enye setha kwakhona amanani yomdlalo.
Inqaku lokugqibela endifuna ukulihoya. Xbox Live-Ukuba sele ubhalisile iprofayile ngenxa yokuba une-Xbox console, akukho mfuneko yokuba wenze nantoni na kwaye xa ufikelela esiphelweni, uya kwaziswa kwidesktop. Ukuba awunayo iakhawunti okwangoku, andikucebisi ukuba uyibhalise njengoko ingazukuvuzwa.